कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने नेपाल सरकार हातखुट्टा छोडेर बसेको छ : डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी | Everest Times UK
राप्रपा अध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री
पछिल्ला दिनहरु कसरी बितिरहेको छ यहाँको ?
अहिले हामी पार्टीको काममा व्यस्त छौं । यद्यपि कोरोनाले गर्दा व्यक्तिगत सम्पर्क गर्नलाई अलि सजिलो छैन । तै पनि हामी पार्टीको काममा लागिरहेका छौं ।
वर्तमान राजनीतिक गतिविधिलाई चाहिँ कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
२०२८ सालमा मैले इटम्वहालमा भाषण गर्दा भनेको थिएँ, ‘लथालिङ्ग देशको भताभुंग चाला, जुन पार्टीले सक्ला त्यही पार्टी खाला’ अहिले त्यही छ स्थिति । नेकपा सरकारको नेतृत्वमा छ । नेकपाका नेताहरुले देशमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नुभएको छ । सिद्धान्त भन्ने कुरा केही पनि छैन । समाजवाद उन्मुख भएको होइन कि देश भ्रष्टाचार उन्मुख भएको छ । जुनसुकै ठूल्ठूला भ्रष्टाचार भए पनि त्यसलाई चोख्याउने काममा सरकारी संस्थाहरु अथवा संवैधानिक संस्थाहरु देखिएको छ । त्यसकारण मान्छेमा आक्रोश छ, असन्तोष बढेर गएको छ । कुरा ठूल्ठूला कामचाहिँ शून्य । डेलिभरी केही पनि छैन । यहाँसम्म कि नेपाल सरकार एकातिर पैसा छैन भनिराखेको अर्कोतिर खर्बौं रुपैयाँ पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसकेर बसिरहेको अवस्था छ । मतलब विकासका लागि चाहिने मूल्य मान्यता अलम्बन गरिएको छैन । विकास भनेको लक्ष्य केन्द्रित निर्णय गर्नु पर्ने विषय हो । त्यो निर्णयलाई चाहिने अनुशासन, दृष्टिकोण सत्ताधारीहरुमा छैन । उहाँहरुमा भएको सत्तामा हामी छौं । पाँच वर्ष हामीलाई केही गर्न सक्दैन । पाँच वर्ष यो देश हाम्रो बिर्ता हो, नभने पनि । भनेको मान्छे राख्न/फाल्न सक्छौं । कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । जे गर्न पनि पाइन्छ । अर्को चुनाव भनेको देखा जायगा । भन्ने मनस्थिति देखिएको छ । त्यसमा उहाँहरुको पार्टीबाट पनि बारम्बार विरोध आइरहेको छ । जसले पार्टीमा एक किसिमको संघर्षको स्थिति सुरु भएको छ । तर देशलाई गुणात्मक आर्थिक विकास गरेर आम नेपाली जनताको गरिबी हटाउने, आम नेपाली जनतालाई माथि उठाउने कुरामा पटक्कै छैन ।
राप्रपा टुटफुटको लामो शृंखला पछि फेरि एकढिक्का भएको छ । फेरि विभाजनको नियति त ब्यहोर्नु पर्ने होइन ?
राप्रपा एकढिक्का भएर लागेको छ । हामी धेरै आरोहअवरोह पार गरेर एकढिक्का भएका छौं । हामी अहिले तीन जना अध्यक्ष भएर बसेका छौं । यो ट्रान्जिसन पिरियड हो । यसमा पार्टी, सबैलाई लिएर गएर राष्ट्रमा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक सशक्त शक्तिको रुपमा यसलाई अगाडि उभ्याउँ । अनि नेपाली जनताको अघि एउटा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उभ्याउने हाम्रो अठोट छ । यसमा तलमाथि केही पनि हुँदैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी साँच्चै एक भएर गएको छ । २०४८ सालमा हामी दुइटा भएर खडा भएका थियौं । एउटा हलो चिह्न, अर्को गाई चिह्न थियो । त्यसपछिको ३० वर्षको पिरियडमा कहिले कता कहिले कता हुँदाहुँदै अहिले पार्टीको झन्डा गाई अंकित छ । पार्टीको चुनाव चिह्न हलो भनेर स्वीकार गरेको छ । हामी एक अर्कालाई विश्वास गरेर, सबै मिलेर पार्टी चलाउने प्रजातान्त्रिक पद्धति र प्रणाली अनुसार जानका लागि प्रतिबद्ध छौं ।
तपाईं गणतन्त्रको समेत वकालत गरिसक्नुभएको मान्छे । अहिले राप्रपाको अध्यक्ष बन्नु भएको छ । पार्टीको सिद्धान्त, एजेन्डा के हुन्छ ?
राजसंस्था चाहिनुको अरु कारण पनि छन् ?
भेटघाटमा पूर्वराजाले के भन्नु भयो त ?
संघीयताप्रति पनि राप्रपाको असन्तुष्टि हो ?
प्रसंग बदलौं । नुवाकोटको भौतिक र राजनीतिक विकासलाई कुन रुपमा नियाल्नु भएको छ ?
भनेपछि यहाँहरुको पालामा सुरु भएका योजना अघि बढेन भन्ने गुनासो हो ?
अन्तमा, नुवाकोटको विकासका लागि के छ तपाईंको दृष्टिकोण ?